Imbali emfutshane yeeSlot Machines
Imbali yeeSlot Machines
Umatshini wokuqala wokuchonga umbane wawuyiBeller Bell.
Ngokubhekiselele kwi-Legal Slots, i-machine slolot yegama elasetyenziselwa ekuqaleni kubo bonke oomatshini bokuthengisa ngokuzenzekelayo kunye namacebo okugembula , bekungekho kwi-20 leminyaka ukuba eli lide lithintela kulo mva. "Umatshini wesityalo" yinye igama laseBrithani kumatshini wokutsalwa. I-bandit ene-armed-weapon enye ibhenwe elidumile.
UCharles Fey & Liberty Bell
Umatshini wokuqala wokucima umbane wawuyiBell Liberty, eyakhiwe ngo-1895 ngomatshini wemoto, uCharles Fey (1862-1944) waseSan Francisco.
Umatshini wokuLungiswa kweBellar Bell ubenamathathu e-spinning reels. I-Diamond, i-spade, kunye neempawu zentliziyo zaye zenziwe ngefayili kwi-reel nganye, kunye nomfanekiso weBell Liberty Bell. I-spin eyenza i-Liberty Bells elandelelanayo ilandelelanisa inzuzo enkulu, inani elipheleleyo leentente ezingamashumi amahlanu okanye ii-nickels ezilishumi.
Umshini wokutyunjwa we-Liberty Bell ungabonakali ube kwi-Liberty Belle Saloon kunye ne-Restaurant e-Reno, Nevada. Ezinye iimishini zikaCharles Fey ziquka iDraw Power, kunye neTrint Spindle kunye neKlondike. Ngomnyaka we-1901, uCharles Fey waqulunqa owokuqala udwebe umshini we-poker. UCharles Fey wayengumqambi we-check checker separator, eyayisetyenziswe kwiBell Liberty. Umngxuma phakathi kwentengiso yokuthengisa yavumela ukufumana ipini ukuhlukanisa iicky nickels okanye i-slugs ezivela kwiiickels zangempela. I-Fey iqeshise uomatshini bakhe kwiimpawu kunye nemivalo esekelwe kwi-50/50 ukwahlula kweenzuzo.
Imfuno yeeSlot Machines ikhula
Umrhumo wooMashishini beSlot Bell ukhululekile.
I-Fey ayikwazanga ukuyakha ngokukhawuleza kwivenkile yakhe encinci. Abaqhubi bezokugembula bazama ukuthenga amalungelo okuvelisa nokusabalalisa kwiBell Liberty, ke, uCharles Fey akazange avume ukuthengisa. Ngenxa yoko ngo-1907, u-Herbert Mills, umenzi waseMickey waseMicrosoft, waqalisa ukuveliswa komatshini wokutsalwa, ukukhonswa kwe-Fey's Liberty Bell, ebizwa ngokuba ngu-Operator Bell.
Iipilisi kwakungumntu wokuqala ukubeka izimbolo zetyatyambo: oko kukuthi i-lemons, ipums, kunye ne-cherries kumatshini.
Indlela i-Original Slots esebenza ngayo
Ngaphakathi komatshini ngamnye wokutsalwa kwesinyithi kwakukho iintsimbi ezintathu zetsimbi ezibizwa ngokuba yi-reels. Isalathisi ngasinye sasineempawu ezilishumi ezibekwe kuso. Kuye kwatshulwa iqhosha elalikhupha i-reels. Xa ama-reels ayeka, i-jackpot yanikezelwa ukuba ezintathu zoluhlobo lwentetho lugqityiweyo. Ukuhlawulwa kwintengo yemali kwanikezelwa kumatshini.
Umatshini wokuqala wokugembela umbane wawunomshini wokurhweba wamahhashi owe-1934 obizwa ngokuba yi-PACES RACES. Ngowe-1964, umatshini wokuqala wokugembula owenziwe ngekhompyutha wakhiwa yi-Nevada Electronic ebizwa ngokuba ngumshini "21". Ezinye ezinye iinguqulelo zekhompyutheni zentlalo yokuggembula zilandelwe zibandakanya ezo zedayisi, i-roulette, ukugijima kwehashe kunye ne-poker (iDale Electronics 'Poker-Matic yayithandwa kakhulu). Ngomnyaka we-1975, umatshini wokuqala wokusebenzisa umbane wakhiwe yi-Fortune Coin Inkampani.
Izixhobo ezinxulumene ne-Oceanography
Imbali yeLunar Rover
Imbali yeBlue Blanket
Imbali ye-Ultrasound kwiMithi
Ngubani uNowa McVicker?
IGranville T Woods 1856-1910
Imbali ye-Kitchen Appliance Inventions
Imbali yeeFilimu zeFelephane
Umda ukususela ngo-1830 ukuya ku-1840
Ngaba Unako Ukukhwaza Ngamaxesha Afanayo?
Imfazwe YaseMerika: iMandla Jikelele uJohn B. Gordon
Ukuguqulwa kweMelika: Omkhulu Jikelele uJohn Stark
Isikhokelo sokuqala kwi-Dynasty yaseAsia yaseAsia
Iindlela ezi-5 zokuxelela ukuba iKholeji yakho iCrash ikuthandayo
Iziganeko ezikhohlakeleyo zesiVumelwano-sesiVumelwano
4 Kwi-1 Classic Motorcycle Exhaust Systems
Amanqanaba okuThembela kunye neNqanaba lokuThembela
Iskripthi sase-Ohio UkuKhutshwa koBume
Ukuqonda iintlobo kunye neeklasi zamaRhashi
IsiSikhhism Matrimonial Dos and Don't
IYunivesithi yaseNebraska kwi-Kearney Admissions
Ulawulo oluphezulu lwangaphandle loBomi
2015 Yamaha FZ-07: Xa iTwin Trumps i-Triple
UDagda, uBawo kaThixo wase-Ireland
Ii desu yo - Iimpawu ezilula zaseJapane
Ikhandlela leBlue Angel Umthandazo
Funda Iingqungquthela ze "Ipulazi" (ukulila) ngesiFrentshi
Indlela Yokukhulisa Amakristal aMaqhezu e-Purple Chromium
Eyona nto ibalulekileyo yoLuntu lweMculo yoMculi-Abahlawuli beengoma
Izizathu zeBar Kochba Revolt
5 IiCorvettes ezingenakuthenga ukuthenga kunye neDrayivu